के गरेर बस्दै छन् गोरे र शोभराज कारागारमा ? | Sawal Nepal |The Power of Information
Posted By: सवाल नेपालon: २०७६ फाल्गुन ७, बुधबार १६:३१ मा प्रकासित Tags: No Comments
काठमाडौं । कारागार, विभिन्न अभियोगमा कैद सजाय तोकिएकाहरुलाई राख्ने गृह । कानुन विपरीतका विभिन्न कार्यमा सक्रिय तथा संलग्न अभियोगमा कैद सजाय पाएकालाई आचरण सुधार्ने उदेश्यले कारागार अर्थात् जेलमा राखिन्छ ।नेपालमा १९७१ सालदेखि कारागारको व्यवस्था गरिएको हो । काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित सदरखोरलाई मुलुकको पहिलो कारागार मानिन्छ । कानुन तथा शासकको योजना तथा चाहना विपरीत कार्य गर्नेलाई मुलुकमा पहिल्यैदेखि थुन्ने गरिन्थ्यो ।
जेललाई व्यवस्थित गर्न २०१९ सालमा कारागार ऐन २०१९ बन्यो । त्यही ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०२० सालमा कारागार नियमावली तयार पारियो । बहुदलीय व्यवस्थामा त्यसलाई परिमार्जन गरियो । २०५० साल श्रावण १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभाग स्थापना भयो । मुलुकभरका जेल कारागार व्यवस्थापन विभाग अन्तरगत संचालन हुँदै आएका छन् ।
मुलुकमा अहिले धनुषा, बारा र भक्तपुर बाहेकका ७४ जिल्लामा कारागार छन् । काठमाडौं र दाङमा २, २ वटा कारागार छन् । काठमाडौंको डिल्लीबजार र सुन्धारामा कारागार छ । दाङको घोराही र तुल्सीपुर छ । कारागारको स्थानीय जिम्मेवारी तथा व्यवस्थापनि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । मुलुकको ७४ कारागारमा १ हजार २ सय ९० महिलासहित १९ हजार ६ सय १८ कैदीबन्दी छन् । त्यस मध्ये १ हजार ८७ जना विदेशी कैदी छन् ।
कैदीबन्दीको पालन पोषण राज्यले गर्दै आएको छ । १८ वर्ष उमेर पुगेका कैदीलाई दैनिक ७ सय ग्राम चामल र नुल तेल र तरकारी वापत ६० रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ । कारागारमा राखिने आश्रित बालबच्चादेखि १८ वर्षसम्मका लागि दैनिक ३५ रुपैयाँ र १ सय ५० ग्रामदेखि ६ सय ग्रामसम्म चालम दिनुपर्छ । कैदीबन्दीलाई दशैं भत्ता जनही ३ सय रुपैयाँ र सुत्केरी भत्ता १ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । कैदीबन्दीलाई वर्षमा २ पटक लत्ताकपडा र २ वर्षको एक पटक ओढ्ने ओछ्याउने दिन्छ । कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचार राज्यले व्यहोदै आएको छ । कैदीबन्दीलाई बेलाबखत सीपमूलक तालिम समेत दिने गरिएको छ । कैदीबन्दीको लागि वार्षिक करिब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
शोजराज– गोरेको चेस
मुलुकको विभिन्न कारागारमा रहेका मध्ये निकै चर्चित अभियुक्त हुन्, चाल्र्स शोभराज र गोरे अर्थात् चुडामणि उप्रेती । बिकिनी किलरका नामले चिनिएका शोभराज २०६१ साउन १९ गते नेपालको जेलमा कैद जीवन बिताइरहेका छन् । ६९ बर्षीय शोभराजमाथि १२ जनाको हत्या अभियोग लागेको छ । उनी बिकिनी किलरका नामले चिनिएका छन् । खुला संसारमा रहँदा आलिसिन जीवन बिताइरहेका शोभराजको साैख जेल पर्दा पनि मरेको छैन । उनले कैदी बन्दीको सेवा सुविधा माग गर्दै आएका छन् , त्यसको लागि उनले जेलमै रहेर अदालतमा मुद्दा समेत हाल्न भ्याए ।
गारे ३३ किलो सुन काण्डमा जेल परेका हुन् । चर्चित यी दुवै कैदी संयोगवस अहिले एउटै जेलमा परेका छन् । दुबै जना सुन्धारास्थित कारागारका छन्, उनीहरुलाई जेलभित्र पनि गोल घरमा राखिएको छ । जेलभित्र गोलमै राखिए पनि उनीहरु अझै साैखिन अवस्थानमै देखिन्छन् । उनीहरु अहिले आपसमा चेस खेलेर दिन बिताउँछन् ।
छुटे ३२९ कैदी
विभिन्न अभियोगका ३ सय २९ कैदीबन्दी बुधबार रिहा भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आचरण सुध्रेका कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गर्नुभएको हो । सरकारले आचारण सुध्रेका कैदीबन्दीलाई हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा रिहा गर्दै आएको छ । जनता समाचार बाट साभार गरिएको
हेर्नुहोस सुनको मूल्य कति पुग्यो? अहिले सम्म